Muxuu Trump qaban doonaa marka ugu horaysa ? | Gaaloos.com
Home » Layaab » Muxuu Trump qaban doonaa marka ugu horaysa ?
Muxuu Donald Trump balanqaaday inuu qabanayo 100-ka maalin ee ugu horaysa ee dowladiisa?
Laakiin balanqaadkiisii inuu "Ameerika wax walba ka hormarinayo" ayaa soo jiidatay dad badan oo dareemaya in dowladda aysan waxba u qaban.
Republican presidential nominee Donald Trump holds a sign supporting coal during a rally at Mohegan Sun Arena in Wilkes-Barre, Pennsylvania on October 10, 2016.Image copyrightAFP
"Xeerarka ganacsiga ayaa noqday kuwa aad u waynaaday oo dilay shaqooyinkii. Hayadaha dajiya xeerarka ganacsiga ayaa ah kuwa aan joojin doono maalinta ugu horaysa" Trump ayaa dhahay bishii September.
"Waxaan waydiisanayaa dadka Maraykanka inay ka waynadaan wararka siyaasadaha fashilmay, oo ay doortaan aaminsanaanta iyo rajada lagu yaqaanay dadka Maraykanka" Mr Trump ayaa ka sheegay Gettysburg " Waxaan idin waydiisanayaa inaad wax wayn ku riyootaan."
In la bilaabo sidii "waddanka looga bixin lahaa in ka badan laba milyan oo qof oo sharci la'aan waddanka ku jooga"
In laga joojiyo visa la'aanta ay ku soo galaan dadka waddamada diida in dadkooda dib loogu celiyo
In Shiinaha lagu sheego inay qiimaha lacagtooda faragaliyaan - iyagoo ka dhigaya marba qiimaha ay doonaan marka la sarifayo.
Xuduudda Mexico ee Nogales, Arizona, United States, October 9, 2016Image copyrightREUTERS
Dhismaha Capitol Hull ee aqalka Congresska ee Washington, U.S., November 7, 2016.Image copyrightREUTERS
Qorshihii Mr Obama uu ka joojin lahaa shan milyan oo qof oo sharci la'aan ah in la musaafuriyo ayaa waxaa joojiyay maxkamad gobolka Texas , waana la hakiyay kadib markii maxkamadda sare ay ku kala qaybsantay. Arrintan ayaa ahayd mid ka mid ah go'aanadii uu qaatay madaxweynaha kaligiis ee aad looga soo horjeestay.
In la meel mariyo go'aankan ayaa hadda ay rajadeedu yar tahay intuu Trump yahay madaxweyne.
Title: Muxuu Trump qaban doonaa marka ugu horaysa ?